UMLANDO: UMartin Vrijland
I-Friesland, ulwimi lwalo kunye nenkcubeko esetyenziselwa ukuba isiqithi phantsi kwe-Iceland ebizwa ngokuba yiFrisland?
Kufakwe kuyo UMLANDO	by UMartin Vrijland	7 Januwari 2017	• 7 Comments
Ukukhawuleza ukuba imbali ingabonakaliswa njani kubonakala ngathi ifunyenwe kwisiqithi saseFrisland kwiimephu ezindala ezibonakala zifumaneka kwiilayibrari zamazwe ngamazwe. Ngaba uye wakha wazibuza ukuba kunokwenzeka njani ukuba kukho abantu abancinci abahlala enyakatho yeNetherlands abathetha ulwimi [...]
Kufakwe kuyo UMLANDO	by UMartin Vrijland	18 Meyi 2016	• 33 Comments
Kwimigangatho yam yokugqibela ndayichaza ngokuphindaphindiweyo, oko kukuthi ihlabathi liqhutyelwa yi-old age bloodlines. Mhlawumbi uya kucinga "Hayi, unokwenza njani umntu oxakekile!", Kodwa kuyafaneleka ukufundisisa, kuba uya kuqonda indlela imbali, ikhoyo kunye nekamva [...]
I-Brexit ayilunganga ngentliziyo yeBritani
Kufakwe kuyo UMLANDO	by UMartin Vrijland	14 Meyi 2016	• 3 Comments
Izolo siye sabona kwiindaba ze-NOS ukuba i-Brexit (leyo iphuma eYurophu ngabaseBrithani) ingaba nemiphumo embi kwimali ye-London. Nangona kunjalo, loo nto ayiyiyo into epheleleyo xa sizama ukucinga ukuba yiyiphi intliziyo yemali yaseLondon. Oku [...]
Imfazwe eSiriya kunye nemfazwe yehlabathi okanye ezayo
Kufakwe kuyo UMLANDO	by UMartin Vrijland	10 Meyi 2016
UMongameli waseRussia uVladimir Putin wabiza izolo ngokusungulwa kwenhlangano yezokhuseleko emhlabeni jikelele ukulwa nobuphekula. Umbuzo kukuba ingaba singagqiba ekubeni nguPutin (okanye u-Putin, ukuba uyathanda) ngokwenene uxhasa i-ajenda yehlabathi-jikelele ye-World Order Order. Ukuze uphendule lo mbuzo unokuba [...]
Usuku loKhuselo lokuBala? Ngaba uyazi ukuba uyabhiyozela?
Kufakwe kuyo UMLANDO	by UMartin Vrijland	5 Meyi 2016	• 0 Comments
Ukuba uya kubhiyozela uSuku lokuBhululwa namhlanje kwaye ucinga ukuba ubhiyozela inkululeko yaseNetherlands kumaNazi, ngoko uthathe isikhashana ufunde ukuba ngaba kunjalo ngokwenene. Kwiwebhusayithi iNyanisoseeker1313.com imbono eyahlukileyo yembali ingatholakala kunokuba [...]
UMartin Vrijland udliwano-ndlebe noSean Hross malunga nendlela abalawuli be-pharaonic abalawula ngayo ihlabathi
Kufakwe kuyo UMLANDO	by UMartin Vrijland	31 Matshi 2016	• 18 Comments
Udliwano-ndlebe nguMartin Vrijland kunye noSean Hross kwi-31 Matshi i-2016 imiba ebalulekileyo ixoxwa ngayo. USean Hross ungumlando-mlando kwaye wayevela eMzantsi Afrika. Ngaphambilana ndandidlilele naye 25 Meyi 2015. Ulwazi lukaSean lubalulekile ekuqondeni konke esikwenzayo namhlanje [...]
Kutheni iYurophu ibonisa ukuba i-Erdogan ayinakwenzeka kodwa isebenza ngokufihlakeleyo kunye noHitler omtsha
Kufakwe kuyo UMLANDO	by UMartin Vrijland	11 Matshi 2016	• 4 Comments
Ngaphambi kweMfazwe Yehlabathi yesiBili sabona imvuselelo enkulu kwezoqoqosho lwaseJamani. UAdolf Hitler wakha amashishini agqibeleleyo kwaye izibonelelo zaphuculwe kakhulu. Oku kwadala recovery enkulu kwezoqoqosho eJamani, apho de ngoko ubunzima izibonelelo enzima emva leMfazwe yokuQala yeHlabathi. Ukuvuselela kwezoqoqosho mhlawumbi kwenza uAdolf Hitler [...]
Ngaba uYesu wayeyinzala kaFaro? Ngaba iintsapho zasebukhosini zikaFaro?
Kufakwe kuyo UMLANDO	by UMartin Vrijland	11 Matshi 2016	• 6 Comments
Ngaba imbali njengoko siyazi kakuhle? Ngaba iinjongo njengoko sizazi ukuba zibonakaliswe kakuhle ezivela kwimvelaphi yazo? Kutheni i-Queen Elizabeth II yaseBrithani enkulu yathwesa itrone ephezulu phezu kwelitye likaYakobi kwaye ingaphezulu kwitepiriti efana nepiramidi? Ngaphambi kokuba ndizalise uhlalutyo [...]
Kufakwe kuyo UMLANDO	by UMartin Vrijland	10 Matshi 2016	• 6 Comments
I 'Order sokuzimisela Federal Republic of Germany (German: Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland) yeyona Order kuphela sokuzimisela yaseJamani wayesendleleni 7 Septemba 1951 ebekwe yi-Federal nguMongameli Theodor Heuss. Kukho into ebetha malunga nalo mnqamlezo. Kwaba Enyanisweni enikezelwe bavelela Dutch. Uluhlu nje: uMongameli uJuliana kunye noPrince Bernhard, uRebeth Beatrix kunye [...]
Imeko yemfazwe eSiriya; Ubukhosi bamaRoma baseNtshona, iByzantium kunye noRhulumente wase-Ottoman
Kufakwe kuyo UMLANDO	by UMartin Vrijland	7 Matshi 2016	• 0 Comments
Ukuze siqonde ukuvela Turkey elikhokelwa nguMongameli Recep Tayyip Erdogan kubalulekile ukuba ukuhlola ethile yomlando. Ukuba siyayazi le ngxelo, siya kuqonda kwakhona indlela ukulwa kwelo xesha e-Syria kunokuchazwa ngayo; maqela asebenzayo kwaye 'ngubani' okanye 'yintoni' eyona [...]
Iindwendwe ezipheleleyo: 1.326.670